I-Apple yethula i-beta yesine ye-macOS 10.15.4 ne-tvOS 13.4 | Ngivela kwa-mac
I-Apple ikhipha i-beta yesine ye-macOS 10.15.4 ne-tvOS 13.4
I-Apple isanda kwenziwa ukuthi itholakalele onjiniyela i- i-beta yesine ye-macOS 10.15.4 t ye-tvOS 13.4 phakathi kwabanye, ngoba kule phakheji futhi ikhiphe izinhlobo ezintsha ze-iOS ne-iPadOS. I-Apple isondela kakhulu esigabeni sokukwazi ukwethula le nguqulo entsha ye-beta enguqulweni ejwayelekile, okungukuthi, eyenzelwe wonke umphakathi.
Uyazi, uma ungunjiniyela, ungabe usalinda futhi landa inguqulo entsha ukuze wazi ukuthi yini okusha okumele uyisebenzisele izinhlelo zakho zokusebenza noma izinhlelo onazo kwi-Mac App Store.
I-beta yesine, azikho izindaba okwamanje. Ukuthuthukiswa nokulungiswa kwamaphutha
Ngemuva kokuqalisa ngoFebhuwari owedlule i-beta yesithathu ye-macOS 26 ne-tvOS 10.15.4, Cishe isonto lisukile emthambekeni, inkampani yaseMelika yethula ukuthi iyiphi i-beta yesine. Ngale nguqulo entsha Abathuthukisi baya kwelinye igxathu endleleni yokukwazi ukuvumelanisa izinhlelo zabo kanye nokusetshenziswa kuzoba yiphi inguqulo entsha yesoftware ye-Apple TV neMac ngokujwayelekile.
Uma nje ungunjiniyela, ungalanda le nguqulo entsha kusuka enkabeni noma kuwebhusayithi i-Apple eyinikele kulolu hlelo lwe-beta. Ungayifaka futhi ngokufakwa kwe-OTA, okungukuthi, ukuyicela ngedivayisi efanelekile. Kulokhu i-iPhone, i-iPad, iMac ne-TV.
Kusesekuseni kakhulu ukwazi ukuthi le beta yesine iphetheni, kepha okucacayo ukuthi kuzoba nokulungiswa kweziphazamiso nokuthuthuka ngaphezulu kwenguqulo yangaphambilini.
Njengoba sihlala sisho kulezi zimo, ungayifaki le beta entsha kudivayisi enkulu, Ngoba kunjalo, ama-betas asetshenziselwa ukuvivinya izinto ezintsha ezingapholishiwe ngokuphelele futhi ezingadala amaphutha angalungiseki. Ngakho-ke, kungcono ukuyifaka njalo kudivayisi yesibili futhi ngaleyo ndlela ugweme izinkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Apple ikhipha i-beta yesine ye-macOS 10.15.4 ne-tvOS 13.4
I-OPPOWatch entsha ibuye ilungiswe ku-Apple Watch
NgoMashi i-Apple iqala ngeNamuhla ekhethekile kumaseshini we-Apple: "Bayakha"